चेपाङ युवाले हेलिकप्टर बनाएर यसरी उडाए सबैका आँखा र मोबाइल आकाश तिर (भिडियो) «
चेपाङ युवाले हेलिकप्टर बनाएर यसरी उडाए सबैका आँखा र मोबाइल आकाश तिर (भिडियो)
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७५, शनिबार १३:११
सबैको हेराइ आकाशतिर थियो ।आँखा मात्रै होइन मोबाइल प्रायको आकाशतिरै फर्काएका थिए । घरका छत, सडक, खुला चौरमा आकाशतिर हेर्नेको भीड थियो । मुख्य सडकका गाडीहरु पनि रोकिएका थिए । किनकी आइतबार राप्ती नगरपालिका–२ गड्यौलीका सारोज चेपाङले आफैले निर्माण गरेको प्यरामोटर उडाएका थिए । जुन कुरा उनले बनाउँदै गर्दा धेरैले ओठ फर्काएका थिए ।
स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर निर्माण गरेको प्यारामोटर उनले आइतबार राप्ती नदीको बगरमा उडाएर सफल परीक्षण गरेका छन् । सफलतापूर्वक प्यारामोटर उडाएपछि उनलाई स्थानीयले फूलामाला र अबिर लगाएर बधाइ दिएका थिए ।
आर्थिक अभावकाबीच निकै लामो समयपछि सरोजले प्याराग्लाइडिङ निर्माण गरेका थिए । सरोजले राप्ती नगरपालिकाको पिप्ले, भण्डारालगायत क्षेत्रको आकाशमा करिब आधा घन्टा प्यारामोटर उडाएका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ४ किलोमिटर दक्षिणतर्फ राप्ती बगरमा परीक्षणका क्रममा स्थानीयबासीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सरोजले करिब ९० हजारको लागतमा प्यारामोटर निर्माण गरेका थिए । सरोजले एक महिना लगाएर एक्लैले प्यरामोटर निर्माण गरेको हुन् । प्यारामोटर निर्माण गर्न १४९ सीसीको मोटरसाइलकोे एउटा पुरानो इन्जिन, एउटा प्यारासुट, ठेलाको टायर, क्लच, ब्याट्री । स्टिल, आलमुनियम र काठको पंखा बनाएर प्रयोग गरेको उनले बताए ।
यसरी उडाए सरोज चेपाङ्गले हेलिकोप्टर भिडियो:
उडान पश्चात सरोज चेपाङले अहिलेसम्म कुनै व्यक्ति तथा सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सहयोग नपाएको बताए । सरोजले आफ्नै लगानीमा स्थानीय स्रोतसाधनबाट निर्माण गरेर प्यारामोटर बनाएका हुन् ।
औपचारिक शिक्षा कम भए पनि तेज दिमागका कारण प्राविधिक क्षेत्रमा उनी अघि बढिरहेका छन् । पढाइ छाडेपछि उनले ग्यारेजमा काम गर्न थाले ।
त्यहाँ गाडी बनाउँदै गर्दा सानो प्लेन र हेलिकप्टर बनाएर व्याट्रीमार्फत उडाउन थाले । निर्माण कार्य सकिँदा करिब डेढ क्विन्टलको जहाज बन्ने उनले बताए । जहाज बनाउनका लागि उनले कच्चा पदार्थ, काठमाडौं, नारायणगढ र वीरगञ्जदेखि ल्याउने गरेका छन् । गाडी चलाउनदेखि, वेल्डिङ, वाएरिङका कामसमेत उनले जानेका छन् । उनले बनाउँदै गरेको प्लेन हेर्नकै लागि अहिले दैनिक करिब २०० आउने गरेका छन् ।
जहाज बनाउँदै सरोज
प्याराग्लाइडिङ अघि निर्माण सुरू गरिएको सानो जहाजको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि ठूलो इन्जिन खरिद गर्न पैसा नहुँदा उनले जहाजको पाटपूर्जा खोलेर राखेका छन् । कक्षा ६ सम्म मात्रै अध्ययन गरेका सरोजले जहाज निर्माणका लागि पाँच लाख भन्दा खर्च गरिसकेका छन् ।
दुई जना चढ्न मिल्ने जहाज बनाउने सोँचका साथ काममा छन् । ‘सुरक्षित रुपमा प्लेन उडाउन ठूलो इन्जिन आवश्यक पर्छ सरोजले भने, ‘तर आर्थिक अभावका कारण निर्माणको काममा अवरोध आएको छ ।’
विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ – मन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउन सबैको
के मोबाइल रातभर चार्जमा राख्नु ग’लत हो, के यसो गर्दा ब्याट्री ख’राब त हुँदैन ?
के तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई रातभर चार्जमा लगाएर छोड्नुहुन्छ ? के यसो गर्दा ब्याट्री ख’राब त
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
एमालेद्वारा आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा अ’वरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा अ’वरोध गरेको छ। संसदीय मर्यादा कायम
भीमबहादुर विश्वकर्माको जा’तीय छु’वाछु’त गर्दै ह’त्या गरिएको भन्दै जनता समाजवादीद्वारा प्रदर्शन
चितवनका ५८ वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्माको जा’तीय छु’वाछु’त गर्दै ह’त्या गरिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष